Warka - Global Fibreglass Industry
Warshadaha Global Fiberglass
Suuqa Fiberglass-ka ee adduunka oo dhan waxaa la saadaalinayaa inuu ku koco US $ 7 Billion, oo ay horseed u tahay koror isku dhafan oo ah 5. 9%. Muraayada Muraayadda, mid ka mid ah qaybaha lagu falanqeeyay laguna cabbiray daraasaddan, ayaa soo bandhigaysa suurtogalnimada inay ku koraan in ka badan 6.
Febraayo 04, 2020 13:58 ET | Xigasho: ReportLinker
New York, Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Reportlinker.com waxay ku dhawaaqeysaa sii deynta warbixinta "Global Fiberglass Industry" - https://www.reportlinker.com/p05798567/?utm_source=GNW
8%. Dhaqdhaqaaqa isbeddelka ee taageeraya kobaca wuxuu muhiim u yahay ganacsiyada meeshan si ay ula socdaan isbeddelka isbeddelka suuqa. Waxay diyaar u tahay inay gaarto US $ 6.2 Billion sanadka 2025, Glass Wool wuxuu keeni doonaa guulo caafimaad oo lagu daro
Dardar xoog leh oo ku aaddan kobaca adduunka.
- Ka wakiil ahaanshaha dunida horumartay, Mareykanka wuxuu joogteyn doonaa koboca 5%. Yurub gudaheeda, oo wali ah cunsur muhiim u ah dhaqaalaha adduunka, Jarmalka wuxuu ku dari doonaa in kabadan US $ 250 Million cabirka gobolka iyo
xoojinta 5 ilaa 6 sano ee soo socota. In ka badan US $ 210.9 Million oo qiimihiisu yahay dalab la qorsheynayo oo gobolka ka imanaya suuqyada Yurub inteeda kale Jabaan gudaheeda, Muraayadda Wool waxay gaari doontaa cabir suuq ah oo ah US $ 241.3 Million marka la gaaro dhamaadka falanqaynta. Maaddaama ay tahay dhaqaalaha labaad ee adduunka ugu weyn iyo beddelka ciyaarta cusub ee suuqyada adduunka, Shiinaha wuxuu soo bandhigayaa suurtagalnimada inuu ku koro 8.8% sannadaha soo socda oo lagu daro qiyaastii US $ 1.9 Billion marka la eego fursadda wax laga qaban karo ee xulashada
ganacsiyo hami leh iyo madaxdooda caqliga badan. Lagu soo bandhigay muuqaalo muuqaal ahaan hodan ah ayaa ah kuwaan iyo kuwo badan oo baahi-badan ubaahan in la ogaado xogta muhiimka u ah hubinta tayada go'aanada istiraatiijiyadeed, ha ahaato galitaanka suuqyo cusub ama qoondaynta ilaha
gudaha faylalka. Dhawr arrimood oo dhaqaala-dhaqaaleed iyo xoogagga suuqa gudaha ayaa qaabayn doona koritaanka iyo horumarinta qaababka dalabaadka ee dalalka soo koraya ee Aasiya-Baasifigga, Latin Ameerika iyo Bariga Dhexe. Dhamaan aragtiyaha cilmi baarista ee la soo bandhigay ayaa ah
iyada oo ku saleysan hawlgelinta la ansaxiyay ee saamileyaasha suuqa, kuwaas oo ra'yigooda ka sarreeyo dhammaan hababka kale ee cilmi baarista.